Yini kungaba izipho ezithakazelisayo for the wedding
Wedding - isenzakalo esibalulekile empilweni pair ngamunye. Futhi wonke umuntu ufuna ukukhumbula lolu suku isikhathi eside. Ukusiza kuleli unga kuzivakashi Uyoletha izipho abasha ezithakazelisayo futhi original.
Yini kungaba izipho ezithakazelisayo for the wedding? Kukhona izixazululo eziningi, ukuba umuntu amane nje ukukhombisa umcabango. Ngakho, ungenza samanje enhle futhi ongenakulibaleka - izimvemvane bukhoma ukunikeza abasha. Omunye nje ukusabela umakoti nomkhwenyana, kanye bonke abakhona lapho ezwa lo mbhangqwana ngeke ukuvula ibhokisi, kanye nenombolo ke vyporhnet enkulu zilwane ezinhle eziphilayo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi isipho esinjalo ngokuqinisekile ngeke sijabulise ambalwa futhi ngeke zikhunjulwe for a lifetime.
Yiziphi, ezithakazelisayo izipho zomshado? Ingase futhi uzilungiselele kusenesikhathi futhi ukwethula celebration for abasha ijazi izikhali lomndeni wawo. Ngakho-ke, lokhu kuyodingeka ukuhlola kancane kokubili ilungu lozalo lo mbhangqwana kanye nokubonisana nabanye ochwepheshe. Kodwa isipho esinjalo singabiza engavamile kakhulu futhi ezithakazelisayo. Futhi okubaluleke, singadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Nansi enye izipho ezithakazelisayo for the wedding: kungenzeka ukwethula imizwa abasha ongenakulibaleka. Ngokwesibonelo, ibanike isitifiketi Skydiving, hot air balloon Ukugibela noma uhambo resort. Uma udinga isipho, izindleko zazo kufanele ibe nesizotha, ungakwazi ukunikeza ambalwa iziqhumane noma ukusebenzisa kwabo emoyeni amathoshi. Imizwelo kusuka ezifana isipho zikhunjulwe ngokunembile abasha isikhathi eside.
Yini enye owanikwayo lomshado ongajwayelekile? Ukwethula nezinsizwa uqobo. Kusho ukuthini? Ungenza oda umakoti nomkhwenyana onodoli (emincanyana zabo kancane) luhlelwe wayenikeze abasha. Ungakwazi embroider ngisho isithombe sabo ngokuhlanganyela. isipho okunjalo kuyoba pair ukuphila, futhi isikhathi eside ziyojabula abathandi.
Kusadingeka imibono ezithakazelisayo isipho lomshado wakho? Kunganjani ukwethula umculo abasha? Ufana kanjani nemvu? Kulula: ungakwazi oda for ukunqoba kwe-orchestra noma iqembu zakho ozithandayo abasanda kushada. Uma ibhajethi yakho nesizotha more, ungavele oda ukugubha ngomculo bukhoma, hhayi ukuzijabulisa ngaphansi tape.
Yini enye kungaba izipho ezithakazelisayo for the wedding? Impendulo ilula: isandla ezenziwe. Lokhu kungaba noma yini: isithombe ngesineke imibala noma Floss efekethisiwe, amabhodwe ubumba noma unodoli ezenziwe ekhaya, iziphandla. Kukhona izixazululo eziningi, udinga kuphela ukubonisa umcabango wenze lokho okuwumsebenzi omuhle.
Bayizipho kakhulu futhi ezihlekisayo. Ababona kuphela izivakashi mnandi futhi honeymooners, kodwa futhi ukhunjulwa isikhathi eside. Ngakho, ungakwazi ukunikeza inhloko iklabishi, njengokungathi wayefuna imali eningi. Can zethulwe umshanelo kahle zahlanganiswa endlini yayilokhu ihlanzekile, noma isitini, okuzoba ngowokuqala ezabekwa abasha ekwakhiweni kwendlu yakhe.
Ungase futhi unike i ezithakazelisayo isipho lomshado. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje ukubuza, yini uhlobo lomshado ukugubha abasha. Kungaba ukotini, ukhuni, ithini, nokunye. E., Kuye ngokuthi ingakanani ambalwa is isihlala ndawonye kakade. Ngale ndlela, futhi kudingeka alungiselele isipho.
Umhlobiso okunesitayela imoto lomshado: ngezandla ukubenza kungenzeka
Faience lomshado: indlela sigubha iminyaka engu ayisishiyagalolunye-?
"Isigodlo izindandatho lomshado" Petersburg
Winter lomshado. Imibono kanye Imihlobiso
Umuthi 'Enerliv ": yokusetshenziswa, incazelo analogs
I- "White Sea Canal". Discography kanye neminye imisebenzi
Kukhethwa ifomu nemfica
Merry Christmas imincintiswano
Lapho ukuya eSpain ekwindla?